Organigramme de RDB
Services Gï¿½nï¿½raux et e P.R.
Publicitï¿½ et Marketing
Flavien Thomas Rakotoarison
RANDRIRIMALALA Nihajanirina Onisoa
RAHARIVOLOLONA Onja Tiana Nadia
DIMBINIAINA Tsilavina Jules
DOMOINA FANJALALAO Anna Antoinnette
Liva Niaina Randriamanisa
Marie Fredeline Ndrasantsoa Ratovoarivelo
Services Gï¿½nï¿½raux et Relations Publiques
Ny sokajin'olona rehetra no kendren'ny Radio Don Bosco. Ka nohasinkasinina ihany koa ny ampahan'ora rehetra ary nankinina amin'ny mpiandraikitra hanentana azy araka ny ilain'ny ampahan'olona ampoizina hihaino amin'io fotoana io.
Ny maraina ary dia lohahevitra isan-karazany mikasika ny fanabeazana no votoatin'ny fanentanana. Mandray anjara ny mpihaino amin'ny antso an-tï¿½lï¿½phone na an-tsoratra. Ireo mpiasa birao sy olona mijanona ao an-tokantrano no ampahany maro amin'ny mpihaino eo.
Ny tolakandro kosa, mitodika kokoa amin'ny tanora ny Radio Don Bosco. Miendrika fampisehoana an-tsehatra ny fitondra ny fandaharana ka mandray anjara mivantana ny mpihaino (telephone, SMS). Mibahan-toerana ny mozika tanora, torohevitra mahasoa, sangisangy fampihomehezana, famakiana ny SMS voaray mandritra ny fandaharana, ary kilalaon-tsaina....
Amin'ny hariva kosa no andefasana ireo fandaharana lehibe fandalinana ny lafim-piainana ara-pï¿½litika, sï¿½sialy, ara-pinoana ary ara-kolontsaina.